भोलिदेखि के खुल्छ, के खोल्न पाइँदैन ? |
भोलिदेखि के खुल्छ, के खोल्न पाइँदैन ?
काठमाडौं, भदौ २४/काठमाडौं उपत्यकामा बिहीबारदेखि ‘सीमित निषेधाज्ञा’ लागू गरिँदैछ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सामूहिक बैठकले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैंकहरू यसअघि नै सुचारु थिए। अब सहकारी पनि खोल्न पाइने छ।
वर्कसप, भाँडापसल, अनलाइन कक्षा, फेन्सी पसल खुल्ने छन्।